नेपाल चार्टड एकाउन्टेन्ट्स संस्थाको निर्वाचन आज, १० पार्षद्का लागि बैंकर महेश ढकालसहित १५ सिए भीड्दै !
ARCHIVE, POWER NEWS, SPECIAL » नेपाल चार्टड एकाउन्टेन्ट्स संस्थाको निर्वाचन आज, १० पार्षद्का लागि बैंकर महेश ढकालसहित १५ सिए भीड्दै !
काठमाडौँ- नेपाल चार्टड एकाउन्टेन्ट्स संस्था (आइक्यान)को काउन्सिलको निर्वाचन आज सम्पन्न हुँदैछ । सिंहदरबार अगाडी रहेको नेशनल ट्रेडिङको हाताभित्र रहेको योगम्बर बैंकोइटमा निर्वाचन सम्पन्न हुन लागेको हो । १० जना काउन्सिल सदस्यका लागि १५ जनाले उम्मेद्वारी दिएका छन् ।
विहान ९ बजेदेखि बेलुकी ५ बजेसम्म मतदान कार्य हुनेछ । निर्वाचनको सबै तयारी सकिएको छ । उम्मेदवारहरु विहानै मतदान स्थल परिसरमा देखिएका छन् । अन्तिम पटक भोट माग्ने प्रक्रिया पनि भइरहेको छ । आजको निर्वाचनको मतगणना आज बेलुका नै हुने बताइएको छ ।
उक्त निर्वाचनमा आइक्यानका हालका उपाध्यक्ष जगन्नाथ उपाध्यायसहित बैंकर महेश ढकालले समेत उम्मेद्वारी दिएका छन् । उनी मेगा बैंक नेपालका चिफ बिजनेश अफिसर हुन् । यस्तै राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका संचालक समितिका सदस्य विद्यावारिधि सिग्देल पनि चुनावमा होमिएका छन् । पूर्ण नामावली यस्तो छ :
प्रकाशित : Friday, June 08, 2018